Detention of hong ko - Inglês - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: detention of hong kong residents in the mai... (Inglês - Birmanês)
The regions of Hong Kong and Macau instituted several measures, particularly in regard to schools and universities.
ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုရှိ ဒေသများတွင် အထူးသဖြင့် ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များအတွက် စီမံချက်များနှင့် အခြားစီမံချက်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။
Vaccine development projects were announced at the Chinese Center for Disease Control and Prevention on 26 January 2020, and the University of Hong Kong on 28 January.
ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရေး ပရောဂျက်များကို 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 26 ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စင်တာ၌၊ ဇန်နဝါရီလ 28 ရက်တွင် ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်တို့၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြသည်။
One of the issue is about the "mainlandization" of Hong Kong media ecology as presented by Claudia Mo,aformer journalist andacandidate running for the coming Legislative Council Election.
ဂျာနယ်လစ်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လာမယ့် ဥပဒေပြုရေးကောင်စီရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရွေးကောက်ခံအမတ်လောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကလောဒီယာမိုက တင်ပြရှင်းလင်းခဲ့တာပါ။
CEPI's other investment partners for COVID-19 vaccine development are Moderna, Curevac, Inovio, Novavax, the University of Hong Kong, the University of Oxford, and the University of Queensland.
CEPI ၏ COVID-19 ဖော်ဆောင်မှုအတွက် အခြားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးပါတနာများမှာ Moderna၊ Curevac၊ Inovio၊ Novavax၊ ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်၊ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်နှင့် ကွင်းစ်လန်းတက္ကသိုလ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
In the same year, HCoV-HKU1 was isolated froma71-year-old man who had been hospitalized with pneumonia and bronchiolitis in Hong Kong.
အဆိုပါတစ်နှစ်ထဲမှာပင် ဟောင်ကောင်နိုင်ငံအတွင်း အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အဆုတ်ပြွန်ရောင်ရောဂါတို့ဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေသည့် အသက် 71-နှစ်အရွယ်လူနာဆီမှ HCoV-HKU1 ကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားသည်။
pan de muerto (Espanhol>Inglês)kash phool (Bengali>Inglês)kya hua aap ko (Hindi>Inglês)kad šī problēma sākās (Letão>Inglês)拔草 (Chinês (simplificado)>Malaio)super thronos viginti quatuor (Latim>Francês)unbebaute (Alemão>Polonês)sapik (Turco>Holandês)solute (Inglês>Estoniano)hypothéqués (Francês>Esloveno)kasama sa gayak di kasama sa lakad (Tagalo>Inglês)macam macam tetmometer (Indonésio>Javanês)kelan ka ba uwi nag pinas (Tagalo>Inglês)loodgieter (Holandês>Francês)el amor de mi vida (Espanhol>Inglês)mi papa esta triste (Espanhol>Inglês)ausbilder (Alemão>Inglês)chamarreÃ¡ramos (Espanhol>Chinês (simplificado))fullmakt (Norueguês>Árabe)fullbuster (Espanhol>Inglês)oy (Inglês>Letão)वह चाय पीता है (Hindi>Inglês)เย็ดหีเด็ก (Tailandês>Turco)mauresmo (Francês>Inglês)kuziba jino (Suaíli>Inglês)